साना दलहरुको एकता: आजको आवश्यकता Globe Nepal News Portal
उग्रवामपन्थी र लम्पसारवादी सोच र प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउँदै गएको नेपाल अब एमाले-माओवादी एकतामा गएर फेरि बल्झिने
पुष्पकमल दाहाल वैचारिकरुपमा अस्थिर र पार्टी सञ्चालनमा अकुशल व्यक्ति हुन्। यिनै दाहाल अहिले एमाले-माओवादी पार्टी एकता गर्न मरिमेटेर लागे। एकतापछिको पार्टी अध्यक्षमा दाहाल र ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरामा उनीहरुबीच सहमति भयो। पार्टीभित्र पेलाहा र विदेशीसामु लम्पसार पर्ने दाहाल र ओलीका बीचमा कसरी पार्टी एकता हुनसक्यो ? जबकि ओली एउटा सग्लो पार्टीको नेतृत्व गर्छन् र राष्ट्रवादी नेताकारुपमा आफ्नो परिचय बनाएका छन्। प्रचण्डको दुई विपरीत उग्रवामपन्थी र लम्पसारवादी सोच र प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउँदै गएको नेपाल अब एमाले-माओवादी एकतामा गएर फेरि बल्झिने निश्चित छ।
एक्लै हिँडेर थाकेका बाबुराम भट्टराई पनि यो एकतामा मिसिएको देखियो। आजको यो परिदृश्यले के देखाउँछ भने कम्युनिष्टहरुसँग विचार भन्ने कुनै चिज हुँदैन। उनीहरु जनतामा विचारको भ्रम छर्ने गर्छन्। सत्ताका लागि मान्छे मार्नु परोस् कि, विदेशीको परिक्रमा गर्नु परोस् कि वा उग्रवामपन्थी तथा लम्पसारवादीसँग एकता गर्नु परोस् - जे गर्दा सत्तामा जान र टिक्न सकिन्छ, त्यही गर्छन्। यस्तो अप्राकृतिक र अनैतिक पार्टी एकता गरेर अलि बढि नै कम्युनिष्टको गन्ध छोड्न खोजिएको हो भने, यसले नेपालको कदापि हित गर्दैन। किनभने चीन नेपालमा आइपुग्न अझै दसौं वर्ष लाग्छ।
हामीहरुले यो भ्रम नपाले हुन्छ कि भारत, युरोप र अमेरिकीहरुसँगको विशाल र व्यापक बजार छोडेर चीन हामीसँगको व्यापारमा सीमित हुनेछ। यसबीचमा नेपालमा गरिने वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदानमा पनि व्यापक कटौती हुनसक्छ। आफ्नो उत्पादन नभएको र आयातमा निर्भर रहेको हाम्रोजस्तो गरीब देशको हालत त्यसबेला के होला ?
प्रश्न कम्युनिष्टहरुतिरमात्रै छैन, कांग्रेसतिर पनि उत्तिकै संगीन छ। यतिबेला कांग्रेसमा नेतृत्वको खडेरी छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ। अन्यथा शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति र चार-चारपटक प्रधानमन्त्री कसरी हुनसक्थे र ?
माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर, ऊसँग चुनावी गठबन्धन गरेर र अहिले माओवादीको समर्थनमा सरकार बनाएर कांग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छविलाई ज्यादै धमिल्याएको छ। कम्युनिष्टहरुले जस्तै कांग्रेसले पनि विचारको राजनीति हैन, सत्ताका निम्ति राजनीति गर्दो रहेछ भन्ने देखिएको छ। अब के कांग्रेस के कम्युनिष्ट कसैलाई पनि विश्वास गर्ने आधार देखिएन।
फेरि पनि पार्टी एकताको एउटा सकारात्मक पक्ष स्वीकार गर्नैपर्छ कि एकले अर्काको रिसमा जहिले पनि संसदको तेस्रो शक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउने गलत परिपाटीको अन्त्य हुनेछ। ठूलै संख्यामा चुनाव नजितेसम्मका लागि तेस्रो शक्तिको अन्त्य हुनेछ। जनमतका आधारमा दुई पार्टीहरुले मात्र सरकार सञ्चालन गर्नेछन्। तसर्थ उनीहरुले नचाहदा नचाहदै पनि यो एकतालाई देशको पक्षमा हुनपुगेको एउटा उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।
अब साना दलहरुको कुरा गरौं। उनीहरुले कुन वैचारिक धरातलमा टेकेर दल खोलेका हुन् ? के उनीहरु आफ्नै बलबुतामा देशको ठूलो दल भई सरकार बनाउन सक्छन् ? के उनीहरु ठूला दलहरुको वास्तविक र वैचारिकरुपमै नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरु हुन् ? आफूलाई वैचारिकरुपमै भिन्न र मूलधारको दावी गर्नेहरुले एकापसमा पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाईसकेका छन् भने साना दलहरु बिस्कुन छरिएझैं छरिएर किन बस्ने ? एमाले-माओवादीले झैं पार्टी एकताको प्रक्रियालाई किन अगाडि नबढाउने ?
अब अलिकति आफ्नै कुरा। २००७ सालदेखि २०७४ सम्म नेपाल किन राजनीतिकरुपमै रुमल्लिइरह्यो ? किन आर्थिक परिवर्तन हुनसकेन ? क-कसको के-कस्ता कमीकमजोरीहरुले गर्दा नेपाल यति पछि प-यो ? यस्तो कुन विचार होला जसले सबै बाधाअड्चनहरुलाई पन्छाउदै नेपालको आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गरोस् ? केही वर्ष यतादेखि हामी यिनै विषयहरुमा गम्भीररुपमा सोचविचार गरिरहेका छौं। केही व्यक्तिहरु, संघ -संस्थाहरु र साना दलहरुसँग हामीले नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ पार्टी गठनको कुरा पटक-पटक गरिसकेका छौं। यसमा उहाँहरु सबैजना सहमत पनि हुनुभएको छ। अब आउँनुहोस्, नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ पार्टीको गठन गर्न एकछिन पनि ढिलो नगरौं।
UML Communist Unification
विश्वमान आङ्गदेम्बे निर्वाचन हुनुनै सबैको जीत । भर्खरै सम्पन्न एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा...